कहाँ चुक्यो सुरक्षा संयन्त्र, किन हुँदै छ लगातार विष्पोट ? – Halkaro
कहाँ चुक्यो सुरक्षा संयन्त्र, किन हुँदै छ लगातार विष्पोट ?
काठमाडौँ । राजधानीलगायत मुलुकभरको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको सरकारले दाबी गरे पनि शृंखलाबद्ध विस्फोट नरोकिएपछि सुरक्षा प्रणालीमै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । शुक्रबारयताका ४ दिनमा मात्रै राजधानीमा झन्डै एक दर्जन विस्फोट भएका छन् । कडा सुरक्षा जाँचबीच कहाँबाट विस्फोटक पदार्थ भित्रिरहेको छ भन्ने प्रश्नसमेत टड्कारो भएको छ ।
← मतपेटिका जोगाउन मूसालार्इ पासो
७२ घण्टासम्म सीमानाका बन्द →